IDRA-21 powder (22503-72-6) hplc =98% | AASraw I-Nootropics powder
/ Imikhiqizo / I-Nootropics powder / IDRA-21 powder (22503-72-6)
SKU: 22503-72-6. Isigaba: I-Nootropics powder
I-AASraw inokukwazi ukuhlanganisa nokukhiqiza kusuka kugaxekile kuya ku-mass mass ye-IDRA-21-22503), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
Ividiyo ye-IDRA-21 powder
I-IDRA-21 ye-powder eyisisekelo sezinhlamvu eziyisisekelo
Igama: I-IDRA-21 powder
Formula Yamamolekhula: C8H9ClN2O2S
Isisindo somzimba: 232.69
I-Melt Point: I-165-168 ° C
I-IDRA-21 ephuziphulayo ekuthuthukiseni ukusebenza kobuchopho nokuthuthukiswa okwengeziwe
Ukusetshenziswa okukhulu kwe-IDRA-21 powder
Njengamanje, kuye kwaba nezilingo ezilwaneni, ikakhulukazi izinkabi namagundane, okwakuboniswa ukuthuthukiswa kwengqondo okungaqondakali ngaphandle kwemiphumela emibi engabonakali. Isilinganiso sezinkawu sasise-3 noma i-5.6 mg / kg, esasetshenziswa ngolwazi ukuthi i-IDRA-21 powder yayingu-10X enamandla kunamanye ama-nootropics.
Nakuba okwamanje akukho izifundo ezitholakala emtholampilo ezigxila kumthamo wokusetshenziswa komuntu, kunezindawo eziningana zokubuyekezwa kontanga e-inthanethi ezikhombisa ama-positive lapho i-IDRA-21 i-powder eluhlaza ithathwa ngomlomo. Okuphakanyisiwe ukugqugquzela ukusebenzisana kokusebenza ku-5-25mg.
Lezi ziqondiso zidinga ukucatshangelwa ngokucophelela, ikakhulukazi njengoba imiphumela ye-IDRA-21 powder ingahlala kuze kube ngamahora we-48. Uma umthamo we-5 mg uthathwa, ngaphandle kokuphazamiseka okubonakalayo ngaleso sikhathi, noma yimaphi amanani okwenziwe okwenziwe kufanele aqaphele ukuthi kungase kube nokuqhekeka kwesikhathi sokuthi kungabangela izinkinga.
Isexwayiso ku-IDRA-21 emgqonyeni ogqamile
Uma kuqhathaniswa nezinye i-nootropics zakudala, i-IDRA-21 powder inemiphumela emibi kakhulu. Ngokuyisisekelo, yenza lokho okuhlose ukukwenza, ngokusekela ukuvuka, nokwandisa ikhono lokufunda futhi akwenzi lutho olwengeziwe. Lokhu kuxhaswa ngokuqhubekayo nemibiko esekelwe ekucwaningweni kocwaningo lwama-rhesus izinkomo ezindala ezincane kanye nekhono lokufunda elilinganisiwe.
Kumele futhi kuqashelwe ezifundweni ukuthi imiphumela ye-IDRA-21 eluhlaza okwesibhakabhaka yafika kumahora we-48. Imiphumela yocwaningo nayo ibonise ukuthi i-IDRA-21 powder yi-10X enamandla kakhulu ukuthi i-Aniracetam, okuyinto imithi enqunyiwe eYurophu enezakhiwo ezifanayo ku-INDA-21. Futhi, imiphumela ye-IDRA-21 powder ingahlala kuze kube yizinsuku ezingu-3 uma kuqhathaniswa newindi yamahora le-2-3 ye-Aniracetam.
Imibiko ye-Anecdotal yabantu abasebenzisile i-IDRA-21 i-powder eluhlaza ifaka phakathi kwemizwa yokukhathazeka okuncane nokukhanda ikhanda Lolu hlobo lokuphendula lungase lusebenze nge-IDRA-21 powder ngabantu abavele benesilinganiso esiphezulu noma okwenyuka umsebenzi we-neural ngakho-ke kudingeka ngempela ukusebenzisa i-IDRA-21 powder.
Kunconywa ukuthi abantu abasanda kuba nesifo sohlangothi; unomlando wesifo noma unobungozi bokushaya isisu akufanele usebenzise i-IDRA-21 powder obuluhlaza. Amanethiwekhi e-Neural asevele ewonakele noma aphelile angonakaliswa kalula ngokusetshenziswa kwanoma yimaphi ama-supplements noma ama-compounds enza noma avuselele umsebenzi we-neuro transmitter.
Njengamanje, ayikho imikhombandlela ecacile ekusetshenzisweni kwe-IDRA-21 powder uma usebenzisa imithi enqunyiwe noma ngomphumela wayo ngaphansi kwezimo zezokwelapha ezingaphansi. Kodwa ukukhathazeka kuye kwaphakanyiswa ekusetshenzisweni kwama-nootropics ngezikhathi ezifanayo njengokusebenzisa izidakamizwa zokucindezeleka njengoba inhlanganisela ingaveza isimo esibi kakhulu
I-IDRA-21 powder iyinhlanganisela entsha ye-nootropic. Isebenza njengomuthi we-ampakine oshukumisayo futhi okwamanje ucwaningwa mayelana nemiphumela yayo ekuthuthukiseni inkumbulo, ukuthuthukiswa kwengqondo, ukugqugquzela nokuguqula ukulahlekelwa kwengqondo. Kungenzeka ukuthi yenziwa ku-1994 noma i-1995 njengoba ukuhlolwa kokuqala kwemitholampilo kanye nezihloko zocwaningo ezibuyekezwe ngontanga zivela ezincwadini ku-1995.
(1) IDRA-21 i-powder Mechanism of Action
U-IDRA ungokwesigaba samakhemikhali eyaziwa njenge-ampakines. Ama-Ampakines angama-modulator ama-allosteric ama-receptors e-AMPA ebuchosheni. Ama-receptors we-AMPA anesibopho sokudluliselwa okusheshayo kwe-synaptic futhi afakwa ku-plastic synaptic kanye nokukwazi ukuhlala isikhathi eside.
Njenge-Ampakine, i-IDRA-21 i-powder eluhlaza isebenza ngokumisa ama-receptors e-AMPA ebuchosheni. Ngokuqondile i-IDRA-21 powder ibophezela kwisayithi ye-allosteric ye-receptor ye-AMPA futhi yenza ukuguquguquka okuhle, ngezinye izikhathi kuthiwa kusebenze ngokusebenza kwe-allosteric.
Ukucwaninga kokuqala ku-IDRA-21 i-powder eluhlaza kusikisela ukuthi kungavimbela ukufunwa kwe-receptor ye-AMP futhi ngaleyo ndlela kwandise izimpendulo ze-synaptic kanye nenkumbulo yokusekela nokufunda.
(2) Isebenza kanjani?
I-IDRA-21 i-powder eluhlaza iyinhlanganisela ye-ampakine nama-ampakines asebenze ama-receptors ebuchosheni bakho abizwa ngokuthi ama-AMPA receptors. Lezi zitholampilo zinomthwalo wokwandisa ijubane lokuxhumana phakathi kwe-neurons yobuchopho, kanye nokuthuthukisa ukufunda nokukhumbula.
I-IDRA-21 powder ibopha kuma-receptors ebuchosheni obusa ukunakekelwa, ukuqapha, nokuphendula. Iphinde ikhulise imiphumela yamanye ama-neurotransmitter engqondo, ikakhulukazi i-glutamate. I-glutamate ingenye yama-neurotransmitter ebaluleke kunazo zonke e-2 etholakala ebuchosheni futhi inesibopho sokucabangela okusheshayo, ukugxila okukhudlwana, isikhathi sokubheka okungcono, namakhono okunciphisa okuthuthukisiwe.
(3) Izinzuzo ze powder IDRA-21
• Ukwandisa ukuqonda (Ukulinganisa imisebenzi eyenziwe yiRhesus Monkeys)
• Ukwandiswa komsebenzi okwandisiwe
• Ukukhula kwesikhumbuzo sesikhashana esifushane
• Imithelela Yokwelapha Okungeyona Engqondweni Ye-Schizophrenia
• Imiphumela Yokwelashwa Ebangelwayo Ekucindezelweni
• Izinzuzo zokulwa nokulahlekelwa kwengqondo okuvezwe yi-Alprazolam
Ukudayiswa kwe-IDRA-21 ye-powder
Indlela yokuthenga i-IDRA-21 powder kusuka ku-AASraw
I-IDRA-21 Raw Powder Recipes:
Izinzuzo ze powder ze-IDRA-21 yezidakamizwa